3D mobile phone magnifier – Rocket Online Shopping
Home ShopGadget3D mobile phone magnifier
3D mobile phone magnifier quantity
Categories: Gadget, Game, Gift, Men, Mobile Phone Accessories, tv, TVs and home theater, Women.	Tags: Mobile Magnifier, screen magnifier, video watch.
ဖုန်းနဲ့ Video ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်တဲ့ သူတွေ mobile phone နဲ့ youtube အကြည့်များတဲ့ သူတွေအတွက် ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ကြည့်နိုင်တဲ့ Screen magnifier လေးကို rocket မှာရနေပြီနော်….
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အလွယ်တကူသယ်သွားနိုင်ပြီး မြင်ကွင်းကို 12 လက်မ ထိချဲ့ ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် မိသားစုနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ် ကလေးငယ်များအတွက် online learning လုပ်တဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ်အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်………။
Phone Screen magnifier လေးကို အသုံးပြုတဲ့ အတွက် mobile ဖုန်းကထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကို သင့်မျက်လုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ချင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ကြည့်နိုင်တဲ့ အတွက် မျက်စိအာရုံစူးစိုက်မှုကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်………။
Phone Stand အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး magnifier Glass လေးကို အသုံးပြုမဲ့ အချိန်မှထုတ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သလို မလိုအပ်ရင်ခေါက်ပြီး သိမ်းထားနိုင်တဲ့ အတွက် နေရာစားလည်းသက်သာစေမှာပါ….
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ပစ္စည်းကောင်းလေးကို အတန်ဆုံးဈေးနဲ့ ရောင်းချပေးမှာမို့လို့ အမြန်ဆုံးမှာယူမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
ဈေးနှုန်း – 6000 kyats (8 inches)
10000 kyats (12 inches)
မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများအားလုံးကို လည်းပို့ဆောင်ခ သက်သာစွာနဲ့ ငွေကြိုလွှဲစရာမလိုပဲစာတိုက်မှ တဆင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီနော်..
Customer တွေကို နွေးထွေးမှု့တွေအပြည့်အဝပေးနေတဲ့ Rocket……
Be the first to review “3D mobile phone magnifier” Cancel reply
Mobile Phone Accessories, Security, Spy
Car Phone Charging Dashboard Holder
Car Accessories, Mobile Phone Accessories
Baseus Iphone Charger
IOS Design Card Phone
Gift, Mobile Phone Accessories
Multi-Grater - Carrot Slicer Ks12,000.00 Ks7,500.00
General-use Comb Ks7,000.00 Ks5,000.00
RingSmartPhone Stand Holder Ks5,000.00 Ks3,000.00
Bluetooth Car mp3 Ks24,000.00 Ks13,000.00
8 Function Cutter Ks17,000.00 Ks9,000.00
Car Seat Bag - leather Ks20,000.00 Ks15,000.00